Sajhasabal.com | Homeनेपालमा पनि आइएसको खतरा ! सतर्क छ त सरकार ?
बालुवाटार प्रदर्शनमा २६ अधिकारकर्मी गिरफ्तार
प्रचण्ड-नेपाल समूहद्वारा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
शरीर बन्धक बनाई जबरजस्ती करणी कसुरका फरार अभियुक्त पक्राउ
प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा एकैसाथ कोरोना खोप अभियान सुरु गरिने
कृषि विकास बैंकले माग्यो ३२६ जना कर्मचारी, कति चाहिन्छ योग्यता ?
बागमती प्रदेशले माग्यो अधिकृतस्तरका १ सय ४९ कर्मचारी (विज्ञान सहित)
भारत-चीन सिमा विवाद : सिक्किममा सैनिक भीडन्त,२४ घाइते
शुन्य लागतमा कतार जान चाहनेहरुको लागि भोलिदेखि ३ दिनसम्म अन्तर्वार्ता हुने, तलव ८० हजारसम्म
कतार प्रहरी अन्तर्वार्ता प्रकरण : श्रममन्त्रीद्वारा एसओएस म्यानपावरको कारवाही फुकुवा (पत्रसहित)
कतार पुलिस : वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा कल्याण सेक्युरिटीमा छापा
विभागद्वारा १८ म्यानपावर कम्पनीको आकस्मिक अनुगमन, कुन कम्पनीलाई के कारवाही भयो ? (बिवरण सहित)
असार १९, काठमाडौँ | बंगलादेश पछी भारत आक्रमणको प्रयासमा आईएस रहेको भन्ने रिपोर्टहरु बिभिन्न समाचार एजेन्सीहरुले सार्वजनिक गरेसंगै नेपाल पनि त्यो जोखिममा परेको छ ।
भारतसँगको खुला सिमानाका कारण कुनैपनि बेला त्यस्ता आतंकवादीहरु नेपाल पस्न सक्नेछन् । बिशेषत: गरिवी, भ्रष्टाचार, बैदेशिक रोजगार र खूकुलो प्रशासनबाट प्रभावित देशमा सजिलै प्रवेश गर्ने सक्ने आतंककारीहरुलाई नेपाल प्रवेश गर्न त्यति अफ्ट्यारो छैन । एक रिपोर्ट अनुसार भारतका मात्र ५०० भन्दा बढी नागरिकहरु आइएसको सम्पर्कमा छन् जस मध्ये १९ जना आतंककारी अहिले पनि आइएसमा काम गर्छन । यस अघिको रिपोर्ट अनुसार २५ जना भारतीय नागरिक आइएसमा रहेको भनिएको थियो जसमा ६ जना बिभिन्न आतंकि हमलामा मारिईसका छन् । अहिले भारतमा रहेका शंकास्पद ५०० जनाको रिपोर्ट इन्टेलिजेन्स एजेन्सीजको राडारले राख्दै आएको छ । भर्खरै खुलाशा भएको एक रिपोर्ट अनुसार भारतमा आइएससँग मिल्ने भारतीयको संख्या अनुमान भन्दा बढी हुन सक्छ ।
बंगलादेश भारतको छिमेकी देश हो । त्यस्तै नेपाल पनि भारतको 'रोटि बेटीकै' सम्बन्ध भएको छिमेकी देश हो । त्यसैले पनि भारतमा पस्ने आईएस आतंककारी नेपाल नपस्ला भन्न सकिन्न । अर्को गौण कुरा के पनि छ भने आइएसले बिभिन्न देशमा आफूलाई घुसाउनको लागि सोहि देशका नागरिक प्रयोग गर्ने गरेको स्पष्ट देखिएको छ । जसमा हाम्रो जस्तो देश, जसको लाखौँ युवा पैसा र रोजगारीकै लागि बिभिन्न देशमा भारतको बाटो वा श्रीलंका हुँदै गईरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आईएसले नेपालमा घुस्ने बाटोको रुपमा यस बाटो पनि अपनाएको हुन सक्छ । अर्को बिषय भारतबाट आइएसमा सक्रिय भएका १९ जना नागरिक छन् भन्दै गर्दा नेपालबाट कोहि पनि नागरिक आईएसमा छैनन् त ? यो नेपालले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बिषय हो । यदी छैनन् भनेपनि खुसि भएर बस्ने बेला छैन .. 'अलर्ट' रहनुपर्छ ।
बैदेशिक रोजगारीको नाममा नागरिकलाई छाडा छोडीदिँदा त्यसले दिर्घकालिन असर गर्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारलाई थाहा छैन वा बुझेर पनि बुझ पचाएको जस्तो देखिन्छ । नेपालसँग कति नागरिक कुन देशमा के-के गर्दैछन् भन्ने पनि डाटा छैन । कानुनी बाटो अपनाएर बिदेशीनेको डाटा सरकार सँग छ तर कति फर्किए, कति फर्किएनन् भन्ने डाटा छैन । त्यसो त भारत र अन्यदेशको बाटो हुँदै विदेशिने नेपालीको डाटा सरकारले चाहेर पनि राख्न सक्ने अवस्था छैन । यो निकै संबेदनशील बिषय हो । रोजगारीको क्रममा पैसाकै लागि बिक्ने नागरिक यस्तो कार्यमा पनि होमिन सक्छन् वा उनीहरुलाई बिभिन्न डरमा यस्तो काममा लाग्न बाध्य बनाईन सक्छ । सरकार सतर्क हुनु जरुरी छ ।
अर्को कुरा खुला सिमाना र फितलो सुरक्षाको कारण तेश्रो वा दोश्रो देशबाट नेपाल सहजै घुस्ने वातावरण नेपालमा छ । नेपाल आउने हरेक बिदेशी नागरिकको कृयाकालापमा निगरानी राख्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा आइएसबाट कुनै थ्रेट नभए पनि नेपालाई सेल्टर बनाउन सक्ने आशंकामा गृह मन्त्रालयले विशेष सतर्कता अपनाउन नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागलाई निर्देशन दिईसकेको छ । आईएसकै बढ्दो गतिविधिका कारण अध्यागमन विभागले सिरियाका नागरिकलाई भिजिट भिसा नदिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।
सरकार अझै यस बिषयमा संबेदनशील बनोस् ।